Juan Torres Zalba. Ajụjụ ọnụ nke onye ode akwụkwọ nke mbụ Senator nke Rome | Akwụkwọ dị ugbu a
Juan Torres Zalba. Ajụjụ ọnụ onye ode akwụkwọ nke The First Senator nke Rome
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 11/11/2021 12:00 | Emelitere ka 24/10/2021 18:22 | Ajụjụ ọnụ, Ndị edemede, Novela
Foto: Juan Torres Zalba, ibe Facebook.
Juan Torres Zalba sitere na Pamplona ma rụọ ọrụ dịka onye ọka iwu, ma n'oge ohere ya ọ na-arara onwe ya nye n'ụdị akwụkwọ akụkọ ihe mere eme. Mgbe ikesa Pompelo. Nrọ Abisunhar, afọ gara aga ewepụtara Onye isi oche mbụ si Rome. Daalụ nke ukwuu maka oge gị na obiọma gị raara nye nke a Ajụjụ ọnụ, ebe ọ na-ekwu banyere ya na ọtụtụ isiokwu ndị ọzọ.
AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ: Akpọrọ akwụkwọ akụkọ ọhụrụ gị aha Onye isi oche mbụ si Rome. Kedu ihe ị na -agwa anyị gbasara ya ebee ka echiche si malite?
JUAN TORRES ZALBA: Akwụkwọ akụkọ ahụ na-akọ ihe ndị mere na Rom Republic n'agbata afọ 152 ruo 146 BC, oge nke ihe omume dị oke mkpa mere, Agha Punic nke atọ na njedebe ikpeazụ na mbibi nke Carthage.
Nke a bụ isi eri nke ọrụ ahụ, site na nke anyị ga-enwe ike ịmata nke mbụ ndị isi akụkọ ihe mere eme nke oge (Scipio Emiliano, agadi Cato, Cornelia, onye bụ nne nke ụmụnne Graco, wdg) , agha kachasị mkpa, mkpọsa na Africa na Hispania, ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke Rome na Carthage, ememe, omenala, ndụ kwa ụbọchị na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na narị asatọ peeji nke ya.
Mgbe akwụkwọ akụkọ mbụ, nke e jikọtara ya na ntọala ndị Rom nke obodo m, Pamplona, ​​achọrọ m iche ihu akụkọ buru ibu, nke nwere oké ọchịchọ, History na mkpụrụedemede ukwu, na oge a nke Republic of Rome enwere m mmasị na ndị odide ya. , ha niile na klas mbụ, akụkọ ya na akụkụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya, ihe mmalite nke mgbanwe nke ụmụnna Graco. Ya mere, nke nta nke nta, echiche nke akwụkwọ akụkọ ahụ pụtara, nke na-amasị m karịa ka m na-aga n'ihu na akwụkwọ ahụ. Naanị mwakpo ikpeazụ nke Carthage nke ndị agha Rom na otú e si enweta ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị a bara uru. Ọ bụ nnukwu obodo nwere usoro mgbidi na-atụ egwu na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke dị njikere maka ihe ọ bụla. Ma ndị Rom banyere. Ọ ga-abụrịrị na ihe mere n’ebe ahụ jọgburu onwe ya.
JTZ: Nke bụ eziokwu bụ na anaghị m echeta nke bụ akwụkwọ mbụ m gụrụ. M ga-ekwu otu n'ime The Five. Nwanne m nwanyị nwere ha niile na ahụrụ m ha n'anya.
Obere obere, ọ bụghị nnukwu, enwere m mmasị pụrụ iche maka nke akpọrọ Edeta's Hill, akwụkwọ akụkọ ụmụaka gbasara Agha Punic nke Abụọ. Ọ ga-ekwe omume na ọ kanyere ihe n'ime m, ọchịchọ ma ọ bụ agụụ maka History na maka akụkọ ihe mere eme dị ndụ.
Agbanyeghị, m na-echeta nke ọma (na nna m na-eme) akụkọ mbụ m dere. Ọ bụ ihe nṅomi nke akụkọ nke "Ise", dị mkpụmkpụ, mana edere ya n'onwe m. Ma nke bụ eziokwu bụ na mgbe m gụrụ ya taa ọ dị m ka ọ dịghị njọ ma ọlị (iji ọnụ ọchị kwuo).
AL: Ma onye edemede ahụ? Ị nwere ike ịhọrọ ihe karịrị otu na site na oge niile.
JTZ: Akwụkwọ akụkọ ndị siri ike masịrị m, ọ bụghị n'ụzọ ihe atụ, mana n'ihi olu ha. Enwere m mmasị na Posteguillo, n'ezie, mana ọkachasị Colleen Mccullough, onye jọgburu onwe ya. Akwụkwọ akụkọ ya ndị Rom oge ochie na-adọrọ mmasị. Okike, nke Gore Vidal, hapụkwara m akara ya.
Ma ọ bụrụ na anyị ahapụ akwụkwọ akụkọ ihe mere eme, enwere m mmasị na Onye-nwe nke Mgbaaka. Ọ bụ otu n'ime ọrụ ole na ole m gụrụ ihe karịrị otu ugboro (Abụghị m onye na-agụ ihe ugboro ugboro).
JTZ: Ọ ga-amasị m ịhụ ọtụtụ ndị, hụ ka ha na-ejegharị na Rom, dị ka Cato, Scipio Emiliano, Cornelia, Appius Claudius Pulcro, Taịbiriọs na Gaius Sempronius Graco, Sertorio, Pompey the Great ... na enwere m obi ụtọ inwe. kere ha. Achọghị m ndị ọzọ, mana oge ruo n'oge.
JTZ: Nke bụ eziokwu bụ mba. Echere m ajụjụ a ruo oge ụfọdụ, mana m na-ahụ na enweghị m manias ma ọ bụ omume. M na-ede mgbe na otú m nwere ike (karịa n'abalị karịa n'ụbọchị), ma na-enweghị ihe ọ bụla pụrụ iche na-ekwu n'ofè eziokwu na m chọrọ a otutu ịgbachi nkịtị. N'ụlọ m, a na-agwa ha na mgbe m na-ede akwụkwọ ọ ka mma ka ha ghara ile m anya (m na-ekwubiga okwu ókè).
JTZ: Chaị, azala m nke ahụ. Oge kacha amasị m bụ n'abalị (Abụ m oke ikwiikwii), na maka ebe ahụ, m na-agbanwe ya mgbe ụfọdụ, mgbe ụfọdụ n'ime ime ụlọ m, ndị ọzọ na tebụl kichin, ndị ọzọ n'ime ụlọ na-eje ozi dị ka ụlọ ọrụ ... dị ka ụlọ ọrụ. ka m na-enye na otú ọ na-adị m nke ọma.
JTZ: Ụdị nke na-amasị m site na ndakpọ ala bụ akwụkwọ akụkọ ihe mere eme. N'èzí ya, ụdị echiche efu na-adọtakwa m, ma dịka ha na-ekwu, ewu na-adọta ugwu ahụ.
JTZ: Ugbu a, m na-emikpu na aga n'ihu nke Senator mbụ nke Rome. Ịgụ akwụkwọ maka ụtọ ịgụ akwụkwọ enweghị m oge ugbu a. Ọrụ m na-achọrịrị nnukwu nraranye, na ohere m nwere bụ ide. N'oge ọkọchị, mụ na El Conquistador nwere ezumike, nke José Luis Corral dere.
AL: Kedu ka i chere ihe nkiri a dị?
JTZ: Ekwenyere m na e debeghị ya ma bipụta ya dịka ọ dịbu, ma n'akwụkwọ ma n'ụdị dijitalụ. Ọ bụ eziokwu na maka ndị na-ede akwụkwọ novice ịnweta onye nkwusa bụ n'ezie mgbagwoju anya, yana ire ere, ebe ọ bụ na asọmpi na àgwà dị oke elu. N'okwu m, enwere m nnukwu chioma inwe ụlọ obibi akwụkwọ na-elekọta m nke ukwuu (The sphere of books). M na-ahụkwa na e nwere ọtụtụ blọọgụ akwụkwọ (dị ka nke a), ndị na-agụ akwụkwọ, otu na netwọk mmekọrịta na ọtụtụ puku ndị òtù, wdg, nke na mgbakwunye na inye visibiliti nke a nabatara nke ọma, na-egosi na mmasị ịgụ ya zuru oke. mkpali.
Ihe ọzọ bụ mmebi nke ndị ohi na-eme, nke yiri ka ọ na-akarị. Mbọ a na-agba n’ịmepụta akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ ọrụ agụmagụ ọ bụla buru ibu, ọ bụkwa ihe na-akụda mmụọ ịhụ ka akwụkwọ ndị pirated si agbasa.
Maka ndị ọzọ, anyị ahụla n'oge na-adịbeghị anya ka nnukwu ndị nkwusa na-edebanye aha ndị na-ede akwụkwọ, nke na-egosi na ụwa mbipụta na-aga n'ihu, na ọ dị nnọọ ndụ.
JTZ: N'ọnọdụ m, enweghị m ọrụ (nke dị iche) ma ọ bụ nwee ahụmahụ na-egbu mgbu, ya mere echere m na enweghị m ihe mere m ga-eji mee mkpesa. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụ eziokwu na, dị ka onye ọ bụla ọzọ, enwere m ọchịchọ dị ukwuu iji nwetaghachi ndụ gara aga, ọṅụ ya, nwee ntụrụndụ, njem ma ọ bụ nwee ike ịnọnyere ezinụlọ na ndị enyi n'atụghị egwu. Agbanyeghị, echeghị m na m ga-enweta ihe dị mma maka akụkọ n'ọdịnihu. Ọ dịla ogologo oge siri ike nke kacha mma ahapụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » Juan Torres Zalba. Ajụjụ ọnụ onye ode akwụkwọ nke The First Senator nke Rome
Cecilia Meireles. Ememe ncheta ọmụmụ ya